शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न लाग्छ, तब त्यसको असर अनुहारमा देखिन थाल्छ – Khabar Patrika Np
शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न लाग्छ, तब त्यसको असर अनुहारमा देखिन थाल्छ
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १९, २०७७ समय: १९:३५:०२
जब श’रीरमा को’लेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न लाग्छ, तब त्यसको अ’सर अनुहारमा देखिन थाल्छ । शरीरमा को’लेस्ट्रोल जम्मा हुँदा आँ’खाको वरिपरी सेतो सेतो दाग देखिन थाल्छ । आँ’खाको आसपास कोलेस्ट्रोल जम्मा हुने स’मस्यालाई डायस्लिपिडेमिया पनि भनिन्छ । जुन एलडिएल को’लेस्ट्रोल बढेका कारण हुने गर्दछ। जुन हाम्रो स्वा’स्थ्यका लागि हा’निकारक हुन्छ । आँखाको वरीपरि जम्मा भएको कोलेस्ट्रोलले अ’नुहारको सुन्दरता बढाउने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले केही घरेलु उपायको प्रयोगबाट आँखामा जम्मा भएको को’लेस्ट्रोल कम गर्न सक्नुहुनेछ ।
आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती घरेलु उ’पाय ? आँखाको आसपास जम्मा भएको को’लेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्नका लागि लसुन कुनै औषधिभन्दा कम हुँदैन् । लसुनको पेस्ट बनाएर आँखाको मुनी करिब १५ मिनेटसम्म लगाउनुहो’स् । लगातार २ दिनसम्म यसो गर्दा तपाईले केही सुधार पाउनुहुनेछ। यदी चाहनुहुन्छ भने लसुन काँचो वा तरकारीमा राखेर पनि खान सक्नुहुनेछ ।
मेथि: मेथिमा को’लेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्ने गुण हुने गर्दछ । यसको प्रयोग गर्नका लागि मेथिलाई राति भिजाएर राख्नुहोस् । त्यसपछि बिहान उठेर त्यसको पानी पिउनुहोस् । खाली पेटमा मेथिको पानी पिउँदा को’लेस्ट्रोलको मात्रा कम हुने गर्दछ । सक्नुहुन्छ भने मेथिको पेस्ट बनाएर पनि आँखाको मुनी लगाउन सक्नुहुनेछ ।
केराको बोक्रो: केरामा एन्टी अक्सीडेट्स र एन्जाइम हुने गर्दछ । जो कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्नमा निकै सहयोगी मानिन्छ । केराको बोक्राले आँखाको मुनी मसाज गरेर त्यसलाई केही बेर त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस् । केही बेरमा त्यसलाई सफा पानीले धुनुहोस् । यसो गर्दा यस स’मस्याबाट राहत मिल्ने गर्दछ ।
दूध: दूध पिउनु स्वा’स्थ्य र छालाका लागि निकै फाइदाजनक हुने गर्दछ। हरेक दिन १ गिलास दूध पिउँदा अनुहारका दाग धब्बा हटेर जान्छन् । साथै आँखाको को’लेस्ट्रोल हटाउनका लागि कपासको सहयोगले आँखाको मुनी दूध लगाउनुहोस् । रातभर यत्तिकै राखेर बिहान मनतातो पानीले अनुहार धुनुहोस् । यसो गर्दा डायस्लिपिडमियाबाट राहत मिल्ने गर्दछ ।
दही: दहीमा ल्याक्टिड एसिड र ब्लीचिङ एजेन्ट हुने गर्दछ । दहीमा कागती मिलाएर केही दिनसम्म लगाउँदा पनि आँखामा भएको को’लेस्ट्रोल कम हुने गर्दछ । याे पनि पढ्नुहाेला !
आँ’खामुनि का’लो घे’रा किन बस्छ ? कतिपयको आँ’खाको तल्लो भागमा कालो धब्बा र घेरा बस्छ । आँखामुनि कालाे हुनुकाे कारण हामी निन्द्रा नपुग्यको बुज्ने गर्छाै तर विभिन्न भिटामिनहरुकाे कमिले गर्दा त्यस्ताे दाग बस्ने गर्छ । आँखामुनि देखिने कालो घेरा अर्थात् डार्क सर्कलका कारण केही महिला आफू नराम्री नभएको महसुस गर्छन् । विभिन्न कारण र खानेकुराको कमीले आँखामुनि कालो घेरा बस्छ ।
कालो धब्बा आफैमा छालाको रं’ग होइन, बरु रगत र पानीको प्रवाहको कम हो,’छाला विज्ञ जस्टिन हेक्सटल भन्छिन् । दिनमा यस्ता धब्बा अझै स्पष्ट देखिन्छ । सुख्खा हुँदा यस्तो धब्बा झनै देखिन्छ । ‘जब तपाईको शरिर सुख्खा हुन्छ वा शरिरमा पानीको मात्रा न्यून हुन्छ छालाको आधारभूत पत्र अर्थात् डर्मिसमा र’गत र पानीको प्रवाह न्यून हुन्छ । अनि भित्री छाला प्रष्ट रुपमा कालो देखिन्छ’,उनी भन्छिन् । तपाईँले अघिल्लो रात सुख्खा खानेकुरा खानुभएको छ वा पानी कम पिउनुभएको छ भने पनि भोलिपल्ट बिहान आँखाको तल्लो भागमा घेरा पर्नेदेखि कालो धब्बासम्म हुन्छ । अझ साँझ पख कफी खानुभएको छ भने त यसको स्ष्ट असर भोलि बिहान आँखामा देख्नुहुन्छ । किन बस्छ आँ’खा मुनि कालाे घेरा ?
भिटामिन ‘सी’को कमी: आँखामुनि कालो घेरा देखिनुको एक कारण भिटामिन ‘सी’को कमी पनि हो। भिटामिन ‘सी’ले छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती, सुन्तलालगायत खान सकिन्छ । भिटामिन ‘ए’को कमी: भिटामिन ‘ए’ ले छालामा एन्टी अक्सिडेन्टको काम गर्छ । छाला चाउरिनबाट जोगाउँछ । आँखामुनि देखापर्ने कालो घेराबाट राहत दिन्छ । गाजर, ब्रोकाउली, पेस्ता, आँप आदि भिटामिन ‘ए’ का स्रोत हुन्।
भिटामिन ‘के’को कमी: छालाका सुरक्षाका लागि भिटामिन ‘के’ को कमी हुन दिनु हुँदैन । यस भिटामिनको काम आँखामुनि कालो घेरा पर्न नदिनु हो । शरीरमा भिटामिन ‘के’ कम भयो भने आँखा वरिपरिको छाला निस्तेज देखिन्छ । यो भिटामिनका लागि खानामा हरियो सागपात, काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, माछालगायत खानेकुरा खानुपर्छ । भिटामिन ‘ई’को कमी: आँखामा पर्ने डार्क सर्कलका लागि भिटामिन ‘ई’ को कमी पनि जिम्मेवार छ। यस भिटामिनको कमीले छाला निष्प्राण देखिन्छ। छालालाई स्वस्थ र चम्किलो राख्न बदाम, एभोकाडो, किवी, जैतुन तेल, ट्राउट माछा खानुपर्छ । याे जानकारी पनि अत्यन्तै जरूरी हुन्छ ।